Bariba Waan Fakan ee Maxaa la Iggaga Farxi – Rasaasa News
Jan 22, 2011 Bari Waan Fakan Maxaa la Iggaga Farxi, ethiopia, Jwxo-shiil, ogaden peace, somalia eritrea
Cairo, Jan 22, 2011 [ras] – Waxaan todobaadkii hore soo qoray in Gabankii beenta ku feegaari jiray bogga Ogadentoday.com, oo u shaqeeya Janan Jwxo-shiil, alaabada loo laabay. Runtii iskama aanaan soo qorin laakiin wiilka qora ayaa Qaahira nagala soo xidhiidhay oo noo sheegay in uu joojiyey bogga, “waayo beenta aan qorayo lacag baan ku gadan jiray” ayuu yidhi wiilku.
Maalmo ka dib waxaad aragtaan bogga Ogadentoday.com oo hawada ku soo laabtay, wiilka qora oo wuxuu maanta noo soo sheegay in tacab badan ka dib la soo gaadhsiiyey lacag dhan $1,600, taas oo ka soo gaadhay dhinaca dalka Australia, waxaana xawaalada u soo dhigay Ina-dhuubo, oo yidhi fadlan ha sii soco boggu.
Lacagtan waxaa dadka ka soo xag xagtay Ina-dhuubo oo uu Gabanku u shaqaynayey labadii sano ee ugu dambaysay. Gabanku wuxuu mudo ku banjaran yahay magaalada Qaahira oo aan “welfare” laga helin, kolkii horeba lagulamana yaabanayn in uu wax walba qoro hadiiba uu nolal ka helayo.
Gabanku wuxuu sheegay in uusan boggu laba arimood midkoodna u sii socon doonin bagan iyo Qorahey.com midkoodna, 1] iyada oo ay soo gaabatay beentii oo aniga laftigaygu aanan ku qanacsanayn, wixii hada ka dambeeya 2] iyada oo ayna kooxda Jwxo-shiil jeeb u haynin in ay bixiso kharajka lagu wado boggagan, laakiin waa suurto gal in uu sii socdo Ogadennet oo ay wadaan dad ay iskuhayb yihiin Janan Jwxo-shiil.
Ogeysiis: Shir Loo Qabanyo Waftiga Dawlad Degaanka Somalida oo Lagu Qabanayo Minneapolis